I-Ultrasonically Polyhydroxylated C60 (Fullerenol) - Hielscher Ultrasound Technology
I-polyhydroxylated C60 fullerene, ebizwa ngokuthi i-fullerenol noma i-fullerol, iyisisindo esiqinile samahhala futhi isetshenziselwa njenge-antioxidant ekufakeni izithako kanye nemithi.
I-ultrasonic hydroxylation iyisimo sokuphendula esisheshayo esilula futhi esilula, esetshenziselwa ukukhiqiza i-polyhydroxylated C60 emanzini.
I-ultrasonically yokwenziwa kwamanzi e-soluble e-C60 inekhwalithi ephakeme futhi isetshenziselwa i-pharma nokusebenza okuphezulu.
Ultrasonic One-Step Synthesis ye-C60 Polyhydrolxylated
I-Ultrasonic cavitation iyindlela ephakeme kakhulu yokukhiqiza amabala aphezulu we-polyhydroxylated C60, angamanzi ancibilikayo ngakho-ke angasetshenziswa ezinhlelweni eziningi ku-pharma, umuthi nakwezimboni. I-Afreen et al (2017) yathuthukisa ukwakheka okusheshayo nokulula kwe-polyhydroxylated C60 (okwaziwa nangokuthi i-fullerenol noma i-fullerol). Ukusabela kwe-LG-isinyathelo esisodwa sisebenzisa i-H2O2 futhi ikhululekile ekusebenziseni ama-reagents angeziwe we-hydroxylating, ie NaOH, H2SO4, kanye nesigaba sokudlulisa ama-catalysts (PTC), abangela ukungcola ku-reselerenol eyakhiwe. Lokhu kwenza ukwakheka kwe-eflerenol ultrasonic kuyindlela ehlanzekile yokukhiqiza i-fullerenol; ngasikhathi sinye, kuyindlela elula futhi esheshayo yokukhiqiza esezingeni eliphezulu, enganyibiliki i-C60.
Izindlela zokuphendula ezingaba khona ekuqukaniselweni okusizelwe yi-Ultrarenol phambi kwe-dil. I-H2O2 (30%).
umthombo: Afreen et al. 2017
I-Ultrasonic Synthesis ye-Water-Soluble C60 – Igxathu emvakwe gxathu
Ukulungiselela okusheshayo, okulula, nokuluhlaza okuhlaza okwenziwe nge-polyhydroxylated C60, okungamanzi okunyibilika emanzini, i-200 mg ka-C60 emsulwa yengezwa ku-20mL 30% H2O2 futhi sonication nge iprosesa ultrasonic efana the UP200Ht noma UP200St. Amapharamitha we-sonication ayengama-30% amplitude, ama-200 W kwimodi yokudonswa kwe-1 h kumazinga wegumbi lokushisa. Umkhumbi wokuphendula ufakwa kubhavu wokujikeleza wamanzi wesiqandisi ukuze kugcinwe izinga lokushisa ngaphakathi komkhumbi emazingeni okushisa asendaweni. Ngaphambi kokwenza i-sonication, i-C60 ayikwazi ukusebenzisa amanzi ku-H2O2 futhi ingxube engenasici engenamabala, ephendukela kumbala onsundu okhanyayo ngemuva kwemizuzu engama-30 ye-ultrasonication. Kamuva, kumaminithi we-30 alandelayo we-ultrasonication liphenduka kube yi-dispersion emnyama ngokuphelele emnyama.
Umhlinzeki we-Hydroxyl: Ukuqina kwe-ultrasonical eyenziwe (= acoustic) kwakha okuvela ku-radical njenge-cOH, cOOH ne-cH evela ku-H2O noH2O2 ama-molecule. Ukusetshenziswa kwe-H2O2 kwimidiya emanzi iyindlela esebenza kahle yokwazisa amaqembu we -OO kwi-C60 cage kunokusebenzisa i-H kuphela2O ngokuhlanganiswa kwe-fullerenol. H2O2 idlala indima ebalulekile ekuqineni kwe-hydroxylation ultrasonic.
I-Ultrasonic hydroxylation ye-C60 isebenzisa i-dil. H2O2 (30%) iyindlela yokushesha neyokushesha yesinyathelo esisodwa ukulungiselela i-fullerenol. Idinga isikhathi esifushane nje sokuphendula, ukusabela kwe-ultrasonic kunikeza indlela eluhlaza futhi ehlanzekile ngesidingo esiphansi samandla, kugwema ukusetshenziswa kwanoma yiziphi izihlungu ezinobuthi noma ezonakalisayo zokuqamba, futhi kunciphise inani lezinto ezixazululayo ezidingekayo ukwehlukaniswa kanye nokuhlanzwa C60 (OH)8∙ 2H2O.
I-UP400St (400W, 24kHz) isisabalalisi esinamandla se-ultrasonic
I-Ultrasonic Polyhydroxylation Pathway
Lapho amagagasi amakhulu e-ultrasound ehlanganiswa abe ngumjikelezo owuketshezi, ukushintshanisa imingcele ephansi / yomfutho ophakeme kudala amabhamuza we-vacuum kulolo ketshezi. Amabhamuza we-vacuum akhula ngemijikelezo eminingana aze angakwazi ukudonsa amandla amaningi, aze awele ngobudlova. Ngesikhathi sokuwa kwe-bubble imiphumela eyeqile yomzimba efana nokushisa okuphezulu nokuhluka kwengcindezi, amaza okuqhaqhazelisa, ama-microjets, izixakaxaka, amabutho e-shear, njll. Lo mkhuba waziwa njenge-ultrasonic noma i-acoustic cavitationAmandla amakhulu e-cavitation e-ultrasonic adiliza ama-molecule kuya ku-COH nakwa-radicals cOOH55. U-Afreen et al (2017) bacabanga ukuthi ukusabela kungase kuthuthuke ngezindlela ezimbili ngesikhathi esisodwa. i-COH ishintsha njengezinhlobo ze-oksijeni esebenzayo (i-ROS) enamathiselwe emgodini we-C60 ukunikeza i-fullerenol (I-Path I), kanye / noma -OH kanye ne-COOH radicals ehlasela ukungasebenzi kwe-electron C60 kabili izibopho ekuphenduleni kwe-nucleophilic futhi lokhu kuholela ekusungulweni kwe-fullerene epoxide [C60On] njengesikhashana esiteji sokuqala (I-Path II) efana nendlela yokwenza ngayo iBingel. Ngaphezu kwalokho, ukuhlaselwa okuphindaphindiwe kwe-COH (noma i-COO) ku-C60O nge-SN2 yokusabela ku-polyhydroxylated fullerene noma i-fullerenol.
Ukuphoqwa kwe-epoxidation kungase kwenzeke okukhiqiza amaqembu e-epoxide alandelayo, isib. C60O2 no-C60O3. Lezi zinhlangano ze-epoxide zingase zikwazi ukukhiqiza ezinye izihambeli njenge-hydroxylated fullerene epoxide phakathi ne-sonolysis (= ukuchithwa kwe-sonochemical). Ukwengeza, ukuvulwa kwendandatho elandelayo ye-C60 (OH) xOy ne -OH kungabangela ukwakheka kwe-fullerenol. Ukwakhiwa kwalaba abaxhumanisi phakathi ne-sonolysis ye-H2O2 noma H2O phambi kuka-C60 akungenakugwema, futhi ukutholakala kwabo ekugcineni kwe-fullerenol (nakuba kungumthamo wokulandelana) ngeke ukwazi ukungaziqedi. Kodwa-ke, ngoba zitholakala kuphela emalini e-fullerenol azilindelekile ukuthi zenze noma yimiphi impembelelo ephawulekayo. [Afreen et al 2017: 31936]
I-Hielscher Ultrasonics inikezela amaprosesa e-Ultrasonics ngezidingo zakho ezithile: Noma ngabe ufuna ukubonisa imiqulu emincane kweleveli yesilinganiso noma ukukhiqiza ukusakazwa okukhulu kwesilinganiso sezimboni, iphothifoliyo ebanzi ye-Hielscher's processors ephezulu ye-ultrasonic inikeza ikhambi elifanele lesicelo sakho. Ukukhishwa kwamandla okuphakeme, ukuguquguquka okuqondile nokuthembekile kwama-ultrasonicators ethu kuqinisekisa ukuthi izidingo zakho zenqubo ziyagcwaliseka. Izikrini zokuthinta zedijithali nokuqoshwa kwedatha okuzenzakalelayo kwamapharamitha e-Ultrong ekhadini le-SD elihlanganisiwe kwenza ukusebenza nokulawulwa kwamadivaysi ethu e-ultrasonic akasebenziseke kalula.
USadia Afreen, uKasturi Muthoosamy, uSivakumar Manickam (2018): I-Sono-nano chemistry: Inkathi entsha yokwenza ama-nanomaterial carbon polyhydroxylated namaqembu ase-hydroxyl kanye nezici zabo zezimboni. Ultrasonics Sonochemistry 2018.
USadia Afreen, Kasturi Muthoosamy, uSivakumar Manickam (2017): Hydration noma hydroxylation: synthesis of fullerenol kusuka epistine fullerene [C60] nge acoustic cavitation phambi hydrogen peroxide. RSC Adv., 2017, 7, 31930-31939.
UGrigory V. Andrievsky, uVadim I. Bruskov, u-Artem A. Tykhomyrov, uSergey V. Gudkov (2009): Okuphawulekayo kwemiphumela ye-antioxidant kanye ne-radioprotective ye-hydrated C60 i-fullerene nanostuctures in vitro futhi e-vivo. I-Biology Yama-Radical Free & Imithi 47, 2009. 786-793.
UMijjlo Gigov, uBorivoj Adnađević, uBorivoj Adnađević, uJelena D. Jovanovic (2016): Imiphumela yensimu ye-ultrasonic ku-kinetics e-isothermal ye-fullerene polyhydroxylation. Isayensi Yokuqothula 2016, 48 (2): 259-272.
Hirotaka Yoshioka, Naoko Yui, Kanaka Yatabe, Hiroto Fujiya, Haruki Musha, Hisateru Niki, Rie Karasawa, Kazuo Yudoh (2016): I-Polyhydroxylated C60 Fullerenes Ivimbela Umsebenzi we-Chondrocyte Wenkondlo Emisebenzini Ye-Nanomolar Concentrations e-Osteoarthritis. I-Journal ye-Osteoarthritis 2016, 1: 115.
I-C60 fullerene (eyaziwa nangokuthi yi-buckyball noma i-Buckminster fullerene) iyimolekyuli eyakhiwa kusuka kuma-athomu ayi-60 ekhabhoni, ahlelwe njengama-pentagon ayi-12 nama-hexagon angama-20. Ukwakheka kwe-molecule ye-C60 kufana nebhola lebhola. Ama-C60 fullerens yi-antioxidant engekho-enobuthi ekhombisa i-potency engu-100-1000 ephakeme kunevithamini E. Yize i-C60 ngokwayo ingeyona inyibilikiswa amanzi, izinto eziningi ezitholakala emanzini ezinjenge-fullenerol ziye zahlanganiswa.
Ama-Clegcwele angama-C60 asetshenziswa njenge-antioxidant nanjenge-biopharmaceutical. Ezinye izinhlelo zifaka isayensi yezinto ezibonakalayo, i-organic photovoltaics (OPV), ama-catalysts, ekuhlanzweni kwamanzi nokuvikelwa kwe-biohazard, amandla aphathwayo, izimoto namadivayisi ezokwelapha.
Ukuqina kwe-C60 emsulwa:
emanzini: hhayi anyibilikisiwe
ku-dimethyl sulfoxide (DMSO): ayinyibiliki
Isakhiwo esingaphezulu sama-C60 fullerenes
umthombo: Yoshioka et al. 2016
I-Polyhydroxylated C60 / Fullenerols
I-Fullernerol noma i-yakazara izakhi ezingama-polyhydroxylated C60 (i-hydrate C60 fullerene: C60I-HyFn). Ukusabela kwe-hydrolylation kwethula amaqembu we-hydroxyl (-OH) ku-molecule ye-C60. Ama-molecule ama-C60 anamaqembu we-hydroxyl angaphezu kwama-40 anokuthambeka kwamanzi okuphezulu (>50 mg / mL). Lezi zikhona njenge-monodisperse nanoparticles emanzini, futhi zinomphumela onamandla wokupholisha. Zibonisa izakhiwo eziphakeme kakhulu ze-antioxidant nezokulwa nokuvuvukala. Ama-polyleroxylated fullerenes (fullerenols; C60 (OH) n) angahlakazwa kwamanye ama-alcohols abese enikezwa inqubo ye-electrochemical, enza ifilimu ye-nanocarbon ku-anode. Amafilimu e-Fullerenol asetshenziswa njengokwenza okuhlanganisa izinto eziphilayo, ukufaka izinto eziphilayo futhi kungenza ukuhlanganiswa kwezinto ezingezona eziphilayo kube izicubu zomzimba.
emanzini: encibilikayo, angafinyelela >50 mg / mL
ku-dimethyl sulfoxide (i-DMSO): i-soluble
e-methanol: encibilikisiwe kancane
Umbala: Ama-Fullerenol athola amaqembu angaphezu kwe-10 -OH abonisa umbala onsundu. Ngenani elikhulayo lamaqembu we--OH, umbala uguquka kancane kancane usuka ku-brown omnyama uye ophuzi.
I-Solubility ye-Solubility ye-C60 (OH) 8.2H2O ngokuqhathaniswa ne-C60 kuma-sol solving ahlukene. umthombo: Afreen et al. 2017
Izicelo nokusetshenziswa kwamaFullerenols:
Imithi: Izidakamizwa zokuxilonga, izidakamizwa ezinkulu, izimonyo, i-nuclear magnetic resonance (NMR) nomthuthukisi. I-DNA iminyene, izidakamizwa ezilwa negciwane lesandulela ngculaza, izidakamizwa ezilwa nomdlavuza, izidakamizwa ze-chemotherapy, izithasiselo zezimonyo kanye nokucwaninga kwesayensi. Uma kuqhathaniswa nohlobo oluhle kakhulu, ama-polyhydroxylated fullerenes anezicelo ezingaphezu kwamandla ngenxa yokuhlunga kwamanzi. Kutholakale ukuthi ama-fullerols anganciphisa i-cardiotoxicity yezinye izidakamizwa futhi avimbele i-HIV-protease, igciwane lesifo se-hepatitis C nokukhula okungavamile kwamaseli. Ngaphezu kwalokho, babonisa amakhono amahle kakhulu okuhlambalaza ngokumelene nezinhlobo ze-oksijeni ezisebenzayo kanye nama-radicals ngaphansi kwezimo zomzimba.
Amandla: Ibhethri ye-solar, i-fuel cell, ibhethri yesibili.
Umshini: Ukugqoka izinto ezinqabile ukugqoka, izinto ezinamalangabi eziluthayo, izinsimbi, izithasiselo ze-polymer, i-membrane ephezulu yokusebenza, i-catalyst, i-diamond yokufakelwa, i-alloy elukhuni, i-viscous fluid kagesi, izihlungi ze-inki, ukugqoka okuphezulu, ukugqoka okubambezela umlilo, ukukhiqiza izinto ezibonakalayo, izinto zokukhumbula , ezifakiwe ezimangqamuzana nezinye izici, izinto ezihlanganisiwe njll.
Imboni yolwazi: i-semiconductor irekhodi eliphakathi, izinto zokwenza amagnetic, inkinobho yokunyathelisa, i-toner, i-inkin, i-paper izinjongo ezikhethekile.
Izingxenye ze-elekthronikhi: i-semiconductor ye-Superconducting, i-diode, i-transistors, i-inductor.
Izinto ezibonakalayo, ikhamera ye-elekthronikhi, i-tube yokubonisa i-fluorescence, izinto ezingenayo i-optical.
Indawo: I-gas adsorption, isitoreji segesi.